नेपालदृष्टि । प्रदेश न: १ को मोरंग जिल्लाको उत्तर दक्षिणकोे यो राजमार्ग निकै समय पश्चात् पुनः मर्मत कार्य सम्पन्न भैराखेको छ । प्रदेशको पहलमा सडक बिभागद्धारा मर्मत हुँदै गरेको उक्त सडकको मर्मत कार्य निकै फितलो भएको स्थानिय बासीहरु बताउँछन ।
लामो पर्खाई पछि हुँदै आएको सडक मर्मतको मापदण्ड छैन । जसरी हुन्छ टाल्दै जाने हो । बाटो कहाँ,कसरी मर्मत हुँदै छ ? त्यसको प्रत्यक्ष स्थलगत अनुगमन छैन । जसका कारण ठेकदारले आफ्नो सुखी र अनुकूल अनुसुार सडक सस्तोमा टाल्दै गरेको देखिन्छ । जसका कारण बाटो राम्रो बन्न नसक्नु सरोकारवालाको प्रभावकारी अनुगमन नहुँनु हो ।
सडक अगाडि बन्दै छ, पछाडि पुनः भत्कदै छ । यो नेपालको सडक निर्माणको पुर्खैली चलन हो । तर पनि सम्वन्धित निकायले चासाकोसाँथ यसमा प्रत्यक्ष निगरानी राखे सडक निर्माण र सर्वसाधारण जनताले दुःख पाउँने थिएनन् । राष्ट्रको सम्पत्ती सही सदुपयोग हुने थियो ।
त्यसैले “आफ्नो बाटो आफैले बनाउँ” जुन नारा छ, त्यसलाई हामीले आफै लागु गर्नु पर्छ ।
हुन त सडक निर्माण कार्यको रुपरेखा हेर्दा कार्यकर्ता पाल्ने र पार्टीलाई चन्दा थुपार्ने प्रबृतिले सडक कहिल्यै आफ्नो आयु सम्म पुग्ने सकेको छैन । सडक देशको एउटा विकास सम्वृद्धिको मुख्य मापदण्ड हो । यसकैे यस्तो हालत भए पछि मुलुकले विकासको कहिले काँचुली फेर्ने ?
त्यसैले “आफ्नो बाटो आफैले बनाउँ” जुन नारा छ, त्यसलाई हामीले आफै लागु गर्नु पर्छ । बाटो कसरी बन्दौ छ ? त्यसको मूल्यांकन स्थानिय बासी हामीले नै गर्नु पर्छ । सही भए धन्यवाद । गलत भएर विरोध गरेर अवरोध खडा गर्नु पर्छ । अनि मात्र बाटो सही बन्छ ।